Ungawenza njani uMzuzu kwi-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Epreli 28, 2021 0 IiCententarios 435
Kwi-twitter, umzuzu lukhetho lwamabali anoxanduva lokubonisa okwenzekayo emhlabeni ngokusebenzisa ii-tweets. Ngokunjalo, la maxesha enza ukuba kube lula kuwe ukuba wenze elakho ibali.
Ngamaxesha, ungabonisa ibali elide, ngaphaya kwama-280 abalinganiswa abakunikwa zii-tweets. Njengaye, ikuvumela ukuba ubonise iindlela ezahlukeneyo ebalini.
Nangona kunjalo, ukudala ixesha akufumaneki kwi-app ye-twitter, kuphela kwiwebhusayithi yayo. Kodwa, yakuba yenziwe, inokubonakala kwisicelo.
Ukuqala ukudala amaxesha akho, kuya kufuneka ulandele indlela yokwenza. Inye kuphela indlela yokwenza emva kokuba ufake iprofayili yakho kwiwebhusayithi ye-twitter:
Ukusuka kwi- "Moments" tab
Fumana ixesha lethebhu kwimenyu esekhohlo yeakhawunti yakho. Yiya kwi "ezinye iinketho" icon kwaye ufake "amaxesha".
Icandelo liya kuboniswa. Kwikona ephezulu ngasekhohlo, uya kubona i icon yombane
Cinezela le icon ukwenza umzuzu. Ngokukhawuleza emva koko i-tab entsha iya kuboniswa ngaphandle kwe-twitter ukwenza njalo.
Amacandelo ahlukeneyo omzuzu aya kuboniswa kwiphepha. Into yokuqala ekufuneka uyenzile ukubeka isihloko.
Emva koko beka inkcazo yomzuzu
Ngenisa ifoto okanye ividiyo kwibhokisi ephambili. Apha ungaseta isiciko somzuzu, ukhethe i-tweet okanye ulayishe enye kwikhompyuter yakho. Cinezela i-icon yeziko, fumana umfanekiso, ukujonga kwangaphambili, emva koko ucinezele ngokulandelayo kwaye ugcine ukugqiba.
Ungawutshintsha umfanekiso wekhava, cofa emfanekisweni, ngakumbi "kutshintsho umxholo wemultimedia yeqweqwe"
Ezantsi ungakhetha iitweets okomzuzwana; Unokukhetha kwiiTweets ozithandayo, iiTweets ngeakhawunti, ikhonkco leTwitter, kunye nokuKhangela iiTweets.
Ukwenza njalo, cofa kwindawo enophawu lokujonga uphawu kwikona ephezulu ngasekhohlo kwe-tweet.
Ungayicima i-tweet nangaliphi na ixesha ngokucinezela X ukucima.
Ngomfanekiso wesityalo, unokuhlengahlengisa ii-tweets ukuze ziboniswe ngokuchanekileyo kwizixhobo eziphathwayo.
Nje ukuba ukhethe ii-tweets eziza kuhamba ngexesha lakhoCofa kwiimpawu zokucima ezantsi nasezantsi ezibekwe ngasekunene kwe-tweet ukuzihambisa.
Kwikona ephezulu ngasekunene uza kubona ukhetho "Gqiba mva" kwaye "upapashe". Ekupheleni koyilo kufuneka ucinezele Shicilela.
Ukuba yimfihlo kwamaxesha
Ukuba ufuna amaxesha akho abucala, ungakwenza oko ngokukhetha ukhetho "wabelane ngomzuzu wabucala" ukuze kuphela abo banekhonkco abanokufikelela kulo. Kwimeko apho ufuna ukuba amaxesha abonakale kuwe, kufuneka ukhethe ukhetho "rhoxisa upapasho lomzuzu"
Kubalulekile ukuba uchaze ukuba, ukuba umzuzu wakho ubonakalisa umxholo ontununtunu okanye okhubekisayo kwabanye abantu, Ingangeniswa kwizikhalazo zomntu wesithathu.
1 Uwenza njani umzuzu kwi-twitter?
2 Ukusuka kwi- "Moments" tab
3 Izinto zomzuzu
4 Ukuba yimfihlo kwamaxesha